MDC-T yaVaChamisa Inoti Sarudzo dzemaPrimary Dziri Kufamba Zvakanaka, Asi Vamwe Vachinyunyuta
Chivabvu 21, 2018
Nhengo dzeMDC-T inotungamirirwa naVanelson Chamisa dzichivhota kuMufakose, muHarare.
WASHINGTON D.C. CHINHOYI —
Sachigaro webato rinopikisa reMDC-T rinotungamirwa naVaNelson Chamisa, VaMorgan Komichi, vanoti bato ravo riri kutarisira kuzopeta sarudzo dzema primary dzekutsvaga vachamirira bato musarudzo dzegore rino mukupera kwesvondo rino mushure mekunge zviri kubuda musarudzo zvazeyiwa neNational Council yebato iri.
Sarudzo dzakaitwa kune dzimwe nzvimbo neSvondo asi kusina kupera kuri kuitwa neMuvhuro.
VaKomichi vanoti vari kufadzwa nemafambiro ari kuita sarudzo idzi, vachiti nhengo dzebato ravo dziri kusarudzo vachavamirira kubva mukanzuru kusvika kuparamende.
Hurukuro naVaMorgan Komichi
Asi kunyange hazvo VaKomichi vari kuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka, dzimwe nhengo dzebato ravo neMugovera dzakaparadza midziyo pamahofisi ebato muChinhoyi dzichinyunyuta nekudomwa kwedzimwe nhengo kuti dzimirire bato musarudzo dzegore rino idzo dzisina kukwikwidza muma primary emubato.
Nhengo dzakaita mhirizhonga idzi dzinonzi dzainge dzabva mumawadhi gumi nemashanu emuChinhoyi.
Nhengo idzi, idzo dzaisvika makumi mashanu, dzaipopota dzichiti hadzisi kufara nekupihwa vamiriri nehutungamiri hwedunhu, dzichiti dzinoda kuzvisarudzira vatungamiri vadzinoda.
Senzira yekuratidza kusafara kwadzo nhengo idzi dzakavharira vashandi vebato mumahofisi uye kurambidza ani nani zvake ayinge achida kupinda mumahofisi ebato.
Vatsigiri ava vaipopota vachiti vaida kuti sachigaro webato mudunhu VaRalph Magunje vauye vataure navo.
Mumwe wevamwe vakaita mhirizhonga, VaRenias Magorimbo, vanoti hapana kuwirirana mubato kubva kumusoro kusvika pasi nekuda kwekumanikidza vanhu kuti vamiririrwe nevanhu vavasingade.
VaMagorimbo vanoti nhengo dzavo dzinofanirwa kunge dzichitsvaga rutsigiro pane kurwisana kwavari kuita mubato.
Sachigaro wedunhu VaMagunje vanoti vanhu vari kuita mhirizhonga havazive mitemo yesarudzo yakatarwa nebato ravo.
VaMagunje vanoti vachawongorora vakakonzeresa mhirizhonga nedonzvo rekuvaranga sezvinodiwa nemutemo webato. VaMagunje vanoti vazhinji vari kuita zvemhirizhonga hadzisi nhengo dzavo dzakaperera pazvido zvebato ravo.
Kusawirirana kwekuti ndiani achamirira bato munzvimbo dzakawanda kunonzi kuri kuitika mudunhu reMashonaland West nemamwe matunhu. KwaMutare MDC-T yakatomisa sarudzo dzemaprimary nesvondo.
Sarudzo dzema primary dzakakonzeresawo mhirizhonga mubato reZanu PF masvondo maviri apera izvo zvakakonzera kuti dzimwe nhengo dzakaita saVaDexter Nduna vekuChegutu West NaVaVengai Musengi vekuChegutu East varidze pfuti izvo zvakaita kuti vasungwe.